हङकङ युनिभर्सिटीमा सबै भावविह्वल ! | WWW.HATTERI.COM
You are here : WWW.HATTERI.COM » Article, Featured » हङकङ युनिभर्सिटीमा सबै भावविह्वल !
हङकङ युनिभर्सिटीमा सबै भावविह्वल !
प्रकाशित मिति Thursday, November 29, 2018
‘नेपालको सुदुर पश्चिमको मधेसको एक गाउँमा प्रहरीको जत्था आयो र सीधै रुपा थारूको घरबाट उनलाई बलपूर्वक घिच्याउँदै निकाली गोली हानी मारियो । उनको उमेर ९-१० वर्षको थियो , उनी २ कक्षामा पढ्थिन् । समाचारमा १७ वर्षिया छापामारको भीडन्तमा मृत्युु भएको बताइयो । संस्कार गर्नलाई परिवारले लास समेत पाएनन् ।उनको ४ वर्षको भाइ र डेढ वर्षको बहिनीलाई आफ्नो दिदीको बारे बताउनलाई आमाबाबुसँँस पासपोर्ट साइजको नेगेटिभ मात्रै थियो ।’ बोल्दा बोल्दै वक्ता मंजुश्रीको गला अवरुद्ध होला जस्तो भयो , हलमा उपस्थित सबै भाव विव्हल बने , मैले पनि हातले भिजेको परेेेली पुछेँ ।
विदेशी दर्शकलाई त्यति थाहा नभए पनि माओवादी जनयुद्धको बेलामा दुवै पक्षद्वारा मानवअधिकार कसरी कुठाराघात भएको थियो भन्ने कुरा हाम्रो लागि नौलो होइन । तर यी कुराहरु चटक्कै भुलेर आजकाल हामी उखान तुक्कामा रमाइरहेका रहेछौं , संवेनाहीनताको पराकाष्ठा नाघेर। “मानवअधिकार र साहित्य लेखन” बारे पेन हङकङको आयोजनामा मिति २८ नोभेम्बरको साँझ हङकङ युनिभर्सिटीको ग्राजुयट हलमा मंजुश्री थापाको लेक्चर सुन्न हामी १० जना नेपाली पनि पुगेका थियौं ।
विदेशी सहभागीहरूलाई लक्षित गरी थापाले लेक्चर दिनेछिन् , हाम्रो लागि उति नौलो केही नहोला भन्ने मनस्थितिमा हामी बसेका थियौं । तर हामीले त भुलिसकेका रहेछौं । ७ साल भुलिसकेछौं,१७ साल भुलिसकेछौं, ३६ साल , ४६ साल सबै भुलेछौं ! दिपेन्द्रले टाउकोमा गोली लिएर ३ दिन राजा भएको पनि भुलिसकेका रहेछौं , ज्ञानेन्द्रले कु गरेको पनि भुलिसकेछौं, जनयुद्धकालमा दशौं हजारले ज्यान गुमाएको (सहिद?) पनि भुलिसकेछौं । र त, हामी दिनहुँ चटक हेर्छौं, ताली पिट्छौं, गाली गर्छौं । तर मंजुश्रीले याद दिलाइन् सबै , अनि त्यो १० वर्षे थारु बालिकाको भोगेको नियतिको कथाले नपोली रहन सकेन ।
“उत्तर र दक्षिणमा मानव सागर छ , शक्तिविहीन नेपाल जस्तो सानो देशको कथा कसले सुनिदिन्छ र ? त्यही पनि त्यहाँको असमानता, अन्यायहरुको कथा लेख्नु मेरो धर्म हो।”नेपालको परिचय सहित यसका समस्या, आफ्नो लेखन दर्शन र नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नुको कारण सबै बारे बोल्दै मंजुश्रीले १ घन्टाको लेक्चर टुङ्ग्याउँदा हल निकैबेर सम्म तालीले गुञ्जायमान भयो, उनको लेक्चर असरदार भएको संकेत देखिन्थ्यो ।
कार्यक्रममा सहजकर्ता बनेकी इलारिया आफै असहज भएकी देखिइन् , लेक्चरले उनलाई भाव विव्हल बनाएको बताइन् । इटाली मूलकी इलारिया मारियाले नेपाल बसाइको क्रममा मंजुश्रीको पुस्तक “ट्युटर अफ हिस्ट्री ” पढिन् । त्यसपछि उनको लेखन शैलीको कायल बनेकी इलारियाकै पहलमा १० अङ्ग्रेजी पुस्तक लेखिसकेकी मंजुश्रीलाई पेन हङकङले निम्त्याएको रहेछ ।
पेन अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यकारहरुको संगठन रहेछ, यसले सर्जकहरुको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउने रहेछ । त्यस सभामा प्रश्नोत्तरको क्रममा सहभागीहरूले राखेका प्रश्नहरुलाई मञ्जुश्रीले प्रभावकारी ढंगले दिइन् । कार्यक्रम पछि बुक साइनिङ गराउन लाम लागेका लर्को देख्दा मंजुश्रीले नेपालीको गौरव बढाएको महशुस भयो ।
हामीलाई निम्त्याएकोमा इलारियालाई ब्यक्तिगत रुपमा धन्यवाद दिएँ , साथीहरूलाई परिचय पनि गराएँ , ” हेलो, मेरो नाम इलारिया मारिया साला हो , मलाई थाहा छ तपाईंहरू मेरो थर सुनेर हाँस्नुहुन्छ।”सबैसँग हात मिलाउँदै उनले भनिन् । “होइन , यो त श्रीमतीको भाइ भनेको त हो।”, मैले हाँस्दै भनेँ।
“राम्रो अर्थमा त्यो हो, थाह छ मलाई “, उनले भनिन् ।
“ओके, सि यु अगेन् साला-जी”, हाङयुग दाइले भन्दा हामी सबै फेरि हाँस्यौं ।
“अल अफ इन आवर लाइभ्स – मंजुश्रीको यो किन्नु नि, एकदमै राम्रो छ” शरन मिसी भारतीय मूलकी लेखिका रहिछन् , हामीलाई सुझाव दिँदै थिइन् । पत्रकार लहरी हामीलाई पनि पेनको सदस्य बन्ने सल्लाह दिँदै थिइन् । हङकङमा आफ्नै दह बनाएर बसेका हामी नेपालीलाई मंजुश्रीको कलमे खड्गोले चोभार छिनाली निकास दिए जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय लेखक समुदायमा घुलमिल हुने बाटो खोलिदिए झैं लाग्यो । यो दहमा हिलो मात्रै थियो कि कमल पनि थियो त्यो चैं रामजाने!
प्रस्तुति : रबाखारा
हङकङ एयरपोर्टमा ब्याडमिन्टन खेल्दिएपछि..
मेन्ल्यान्ड चाइनिज आशंका गरिएका दुई प्रौढले एयरपोरर्टको बोर्डिङ गेट नेर टाइम पास गर्न ब्याडमिन्टन खेलेको…
हङकङ एयरपोर्टमा आगलागी
हङकङ एयरपोर्टको भि आई पि लाउन्जमा हिंजो शुक्रबार राति पौने दश बजे आगलागी भएको समाचार…
हङकङ एयरपोर्टमा हड्ताल
हङकङका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सि वाई ल्योङले आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको भनी हिँजो हङकङ…
« ‘ट्युटर अफ हिस्ट्री’ मा जनजाति र महिलाको कथा…
चिङ् यी मा दुर्घटना ५ को मृत्युु .. »